Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Japan » Tokyo weliri mmachi ụlọ nri ka ikpe COVID-19 ọhụrụ na-agbada
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Mmanya & mmuo
Tokyo na-ebuli mmachi ụlọ oriri na ọṅụṅụ ka ikpe COVID-19 ọhụrụ na-ada.
Na Tokyo, ihe dị ka ụlọ oriri 102,000 enwetara dị ka ọ dị mkpa mgbochi COVID-19 agaghị adị n'okpuru arịrịọ ka ịkwụsị ịṅụ mmanya na-aba n'anya n'elekere 8:00 nke abalị n'oge obodo.
Ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa coronavirus ọhụrụ enwetara agbadala nke ukwuu n'ofe Japan.
Isi obodo Tokyo kwuputara naanị ikpe 19 ọhụrụ nke ọrịa COVID-19 na Sọnde.
Ebuliri mmachi ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na Tokyo ma gbaa gburugburu na nke mbụ n'ime ọnwa 11.
Dika ekwenyesiri na ikpe COVID-19 kwa ụbọchị dara nke ukwuu na Japan na Sọnde, Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba na Osaka weliri mmachi COVID-19 n'ụlọ nri taa.
Ewelitere mmachi na ịṅụ mmanya na-aba n'anya na oge ọrụ n'ụlọ nri dị na isi obodo na Osaka na nke mbụ n'ime ọnwa 11, na-esochi ọnọdụ na-aga n'ihu na ọrịa na-efe efe n'ofe Japan.
Kwa ụbọchị kwenyesiri ike na ikpe COVID-19 gbadara na 236 n'ofe mba ahụ ụnyaahụ, ma e jiri ya tụnyere ihe karịrị 25,000 kọrọ na etiti August, n'oge ọrịa nke ise nke ise.
Tokyo kwuputara ọrịa 19 kwa ụbọchị na Sọnde, nke kacha nta kemgbe June 17 nke afọ gara aga.
Na Tokyo, ihe dị ka ụlọ iri nri 102,000 enwetara dị ka ọ dị mkpa mgbochi COVID-19 agaghị adị n'okpuru arịrịọ ka ịkwụsị ịṅụ mmanya na-aba n'anya n'elekere 8:00 nke abalị n'oge obodo. Agbanyeghị, ihe dị ka ụlọ iri nri 18,000 na-akwadoghị ga-aga n'ihu na-agbaso mmachi ochie ahụ ma kwụsịchaa ije ozi n'elekere 9:00 nke mgbede oge mpaghara.
Na mgbakwunye, a ga-arịọ ụlọ oriri niile ka ha belata ọnụ ọgụgụ otu na mmadụ anọ n'otu tebụl, maka otu buru ibu, a ga-achọ ihe akaebe ịgba ọgwụ mgbochi.
Gọọmentị obodo Tokyo kwuru na ọ ga-akwado usoro mgbochi COVID-19 ruo na ngwụsị Nọvemba iji kwalite mgbake nke ọrụ mmekọrịta ọha na eze yana igbochi nlọghachi ọrịa.